Umthandazo wokukhuselwa kwiliso elibi. ? [+ Onamandla]
IPoderosa Umthandazo wokukhusela kwiliso elingendawoSonke kufuneka siphendukele kuncedo olukhulu ukuzikhusela kubantu abanomona nabangendawo. Iingcali zethu zihlala zikulungele ukubonelela ngemithandazo, iindumiso kunye namacebiso okusikhusela thina kunye neentsapho zethu kumandla amabi abanye abanokuthi bawafake kuthi.
1 Umthandazo wokukhusela kwiliso elingendawo
2 Umthandazo oya kwi-Holy Mark kunye kwi-Saint Tame ukukhusela ngokuchasene neso esibi
2.1 Funda uvelwano olunamandla ngomsebenzi.
Umthandazo wokukhusela kwiliso elingendawo
Ilanga iphakathi kwaye ibonisa isivakalisi esinamandla kakhulu. “Uya ngaphaya kweliso elibi. Uyazahlula kwabo bathetha kakubi ngathi, kubahlobo bobuxoki nakuye nawuphi na umntu oxokayo. Yenza njalo ngeentsuku ezi-3 kwaye akuyi kuba nelitye elishiywe lingaphendulwanga.
Umthandazo oya kwi-Holy Mark kunye kwi-Saint Tame ukukhusela ngokuchasene neso esibi
“ISan Marcos indiphawula, kwaye iSan Meek iyandimosha. UYesu Krestu uyayithambisa intliziyo yam kwaye aphule igazi lam elibi, umkhosi ozinikeleyo phakathi kwam; ukuba iintshaba zam zineentliziyo ezimbi musa ukundicaphukela; kanye njengokuba u-Saint Mark no-Saint Tame baya entabeni, kwaye kukho iinkunzi zeenkomo ezomeleleyo kunye neemvana ezilulamileyo, zabenza ukuba bathinjwe kwaye baba noxolo ezindlwini zezindlu, ukuze iintshaba zam ziboshwe kwaye zinoxolo ezindlwini zezindlu zazo phantsi Unyawo lwam lasekhohlo; Kanye njengoko amagama oMarko oNgcwele kunye no-Saint Meek echanekileyo, ndiyaphinda:
Nyana, buza into osukuba uyithanda, bokukhonza ntoni na; uthi endlwini esemhlabeni, ukuba ndinenja eluhlwini, suka uphume endleleni; emnyango ngesandla sasekhohlo, ndifuna ukuba uvule ngokukhawuleza «.
INkosi yethu uYesu Krestu yehla emnqamlezweni kwaye uPilato, uHerode noKayafa babengababulali bakhe, kodwa wayamkela yonke le nkohlakalo. Xa uYesu wayesemyezweni, ethandaza, wajika waza wazifumana engqongwe ziintshaba zakhe, wathi, "Rope of sursum!" Bonke bawa phantsi wada waphela uMthandazo wakhe oNgcwele; kanye njengoko amazwi kaYesu Krestu, lawo kaSan Marcos noSan Tame athambisa iintliziyo zabo bonke abantu abakhohlakeleyo, izilwanyana ezinoburhalarhume, nayo yonke into ababefuna ukuyichasa, abaphilayo nabafileyo, emphefumlweni nasenyameni, nakwimimoya emdaka, ebonakalayo. kwaye engabonakaliyo. Andiyi kutshutshiswa ngenxa yentswela-bulungisa, naziintshaba zam ezifuna ukundenzakalisa, naziintlungu enyameni nasemphefumloni.
Ndiza kuhlala ndihlala endlwini yam ethe cwaka, ezindleleni nakwiindawo zokuhamba. Akukho mntu okanye silwanyana naluphi na uhlobo esiya kundenzakalisa, kodwa ngokuchaseneyo, wonke umntu uya kundinceda kuyo nayiphi na into endiyifunayo.
Ndikhatshwa ngulo mthandazo unamandla kwaye ungcwele, ndiza kuba nobuhlobo bomntu wonke kwaye wonke umntu uya kundithanda, kwaye akukho mntu uya kwenzakaliswa. Bayibenjalo!"
Funda lo mthandazo ukuze uzikhusele kwiliso elibi ngaphambi kokuba ulale kwaye ukukhusele kubo bonke abafuna ububi bakho!
Yonwabela kwaye ufunde kwakhona:
Funda uvelwano olunamandla ngomsebenzi.
(embhile) https: //www.youtube.com/watch?v=_V_OGkMhhjE (/ embed)